Yatsva: Taura paIndaneti nevatengi vedu - Toolsdecuisine.com
Yatsva: Taura paIndaneti nevatengi vedu
28 September, 2017 • online help • taura paIndaneti • pakarepo kukurukura • mameseji • nhau • utsva • tsigira
Uye imwezve! Zvitsva izvo zvandaida kuzivisa nhasi: kuwedzera mutumwa wekutsvaga.
Dzimwe nguva patinotarisa webhusaiti yatinoitika kuti tine mibvunzo pamusoro pechigadzirwa, kana kuti tingaronga sei nezvimwe ... uye munyaya iyi tinoda kuva nemhinduro pakarepo (ikozvino kusashivirira) iri fashoni!).
Chii chinonyanya kukosha kudarika kukwanisa kubvunza mibvunzo iri paIndaneti kuburikidza nehurukuro yekutaura, kune mumwe wevashandi vedu ?!
Kuti uzarure pakarepo meseji kungofa pane bhanhire rakasvibirira kurudyi kwechiso chako (rine bluu rakanyorwa kuti "Tiri pano") uye nyora mubvunzo wako uye tapinza "Enter" kiyi pane keyboard yako :-)
Iwindo rekukurukura rinotanga pazasi kwezasi kwechiso chenyu uye iwe unogona kutaurirana nemumwe wevashandi vedu. Ichokwadi kuti ivo vakaita sevamwe vanhu, dzimwe nguva vanovata, dzimwe nguva havasashandi, saka mune izvi mamiriro acho ezvinyararire, siya mharidzo yako uye isu tichakupindura iwe nokukurumidza kana zvichibvira ;-)